~Du’a dheefa du’a dheeyxee? -
~Du’a dheefa du’a dheeyxee?
Du’a dheefa, du’a dheyxee…
Yaa lammikoo, karaa meeyxee ?
Nama keessaa si filattee
Goojjo teetii gad darbitee
Qeheef maatiin gargar baaftee
Lagaa gaaraan baaftee buuftee
Baddaaf gammoojjiin labsitee,
Gooroo buttuu si geeffattee ?
Namni hin jiru gooroo buttuu
Iyya keetiif kan dirmatuu
Eega bulguu afaan bantuu.
Gugurraattii bifa hamtuu
Dukkanooytuun foon foonfii nyaattu,
Tan dubartiif joollee gattu.
Ilma namaaf naasuun qabduu
Firaaf diina addan baaftuu
Hin waywaatin kadhaan beeytuu
Eega du’uun sirraan oollee
Du’a Booyyee du’a Saree Maalif duuta akka malee?
Dheeysaa du’uun nuun hin mallee
Haa waraannu garagallee
Eega duuti nurraan oollee,
Du’a dhiiraa du’a boonsaa du’uu malee!
Waan qabduun waliin loli
Irkoo dhabdus goda galii
Dhiiga bulguu dhangalaasii
Keetiif kansiis wali makii laga yaasii
Haftee goototaa tahuukee agarsiisi!!
Tags aadaa walaloo
Previous MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Lammaffaa
Next Irbuu Gootota Keenya Shinniggaa: Furmaata Hookkara Maqaa Amantiitiin Deemuutti Jiruu